जाने हाे इजरायल : अब खुल्दै छ आवेदन, यस्तो छ प्रक्रिया ! – Krazy NepaL
March 14, 2021 303
काठमाडौँ । नेपालबाट दक्ष श्रमशक्ति इजरायल पठाउने नेपालको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गत माघ पहिलो साता नेपाल र इजरायल सरकारबीच कार्यान्वयन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै श्रमशक्ति पठाउने आन्तरिक कार्यविधि बनाउन थालिएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नेपालबाट इजरायल पठाउने दक्ष जनशक्तिका लागि कार्यविधि बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र त्यो बनेपछि छिट्टै आवेदन खुला गरिनेछ ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले श्रमशक्ति पठाउने आन्तरिक कार्यविधि बनाउने कार्य अन्तिम चरण पुगेको र कार्यविधि तयार भएपछि त्यही आधारमा आवेदन माग गरिने जानकारी दिए । उनले भने, “यो कार्यविधिले विशेषगरी इजरायल पठाउने श्रमिकको योग्यता, क्षमतालगायत छनोट प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट गर्नेछ र यही आधारमा आवेदनको माग गरिनेछ ।” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
कार्यविधि बनाउने कार्यमा सदस्यका रूपमा रहनुभएका वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कार्यान्वयन प्रोटोकलमा पुसको पहिलो साताभित्र हस्ताक्षर हुने बताउनुभयो । उहाँले कार्यान्वयन प्रोटोकलमा दुई देशबीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको एक÷दुई साताबाट श्रमिक छनोट सुरु हुने र डेढ दुई महिनाभित्र पहिलो चरणका लागि तोकिएका पाँच सय जना इजरायल जान सुरु हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो प्रक्रियाबाट इजरायल गएकाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा के कस्तो इमानदारिता देखाउन सक्छन्, त्यही आधारमा पछि थपिने
सङ्ख्याको टुङ्गो लाग्नेछ । ”
इजरायलमा ६० हजार विदेशी केयरगिभर छन् । यसअघि सन् २०१७ मा एक संस्थाले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार इजरायलमा झन्डै १५ प्रतिशत केयरगिभर नेपालका रहेका छन् । इजरायल र नेपाल सरकारबीच २०७२ साल साउनमा केयरगिभरमा नेपाली श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा एक सम्झौता (एमओयू)मा हस्तााक्षर भएको थियो । कमाइ र सुरक्षाको दृष्टिले निकै आकर्षक मानिएको इजरायलको रोजगारी सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता (जीटुजी) भएको पाँच वर्ष नपुग्दै बन्द भएको थियो ।
Prevराति सुत्दा मुखबाट अनायसै र्‍याल चुहिनु यी खतरनाक बिमारीको संकेत, तपाईको चुहिन्छ ?
Nextतपाँई बिहानै खाली पेटमा चिया पिउँ;नुहुन्छ ? एकपटक अवस्य पढ्नुहोस तपाँईलाई यस्तो हुनपनि सक्छ !…